रोचक / विचित्र – Page 124 – Medianp
अब ४ घण्टामै विश्वका जुनसुकै कुनामा पुग्न सकिने, यस्तो छ विमान
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १४, २०७५१७:१९0
एजेन्सी,१४ साउन । आगामी केही वर्षको अवधिमा तपाई विश्वको कुनै पनि भागमा ४ घन्टाको अवधिमा विमानबाट पुग्न सक्नु हुन्छ ? यो सुन्नमा अचम्म लाग्ला तर चाडैनै यो कुरा यथार्थमा बदलिन सक्छ । भविष्यमा ध्वनीभन्दा पाँच गुणा
दुर्घटनामा परि गर्भवती महिलाको मृत्यु, तर गर्भबाट बाहिर आएको शिशु भने जिवित
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १४, २०७५१४:५६0
एजेन्सी,१४ साउन । दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकी एक गर्भवती महिलाको गर्भबाट बाहिर आएको शिशु भने जिवित रहेकी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ । गत शुक्रबार ब्राजिलको एक भयानक दुर्घटनामा आमको मृत्यु भएपनि गर्भमा नै रहेकी एक
यी ५ कुरा अपनाउनुस् बढ्न सक्छ तपाईको आम्दानी
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १४, २०७५१२:१४0
एजेन्सी,१४ साउन । वास्तुशास्त्रका अनुसार यदी तपाईले केही महत्वपूर्ण कुराको ध्यान राख्ने हो भने तपाईको आम्दानी बढ्न सक्छ। युक्तकल्पतरु, अलंकारशास्त्र र मण्डन शिल्पशास्त्र जस्ता ग्रन्थमा यस्ता केही उपाय बताइएका छन्। जुन नियमको पालना गर्दा घरको
बेडमा सुतिरहेकी महिला, जब आँखा खोलिन् तब उड्यो होस्
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १४, २०७५११:३७0
एजेन्सी,१४ साउन । लन्डनको किंस्टनमा एउटा निकै अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । आफ्नो काम पुरा गरेर थकाइ मारेर बसेकी ती महिला सधैँ जस्तो आफ्नो काम पूरा गरेर आफ्नो बेडमा आराम गरिरहेकी थिइन्। सुत्ने बेलामा
गर्भवती बाख्रा मरेपछि ८ जना बिरुद्ध लाग्यो सामुहिक बलात्कारको आरोप
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १३, २०७५१६:४७0
एजेन्सी,१३ साउन । भारतको हरियाणामा एउटा गर्भवती बाख्रा मरेपछि ८ जनालाई पशु सामुहिक बलात्कारको आरोप लागेको छ । भारतिय मिडियाका अनुसार बाख्राको मालिकले २५ जुलाईमा ती ८ जनाको विरुद्धमा प्रहरीमा उजूरी दर्ता गराएपछि आरोपीहरु फरार रहेको
कुकुरको टाउकोको मूल्य ७६ लाख !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १३, २०७५१६:१४0
एजेन्सी,१३ साउन । कोलम्बिया संसारभरी लागुऔषध तस्करीका लागि बदनाम छ । यहाँ वर्षौंदेखि लागुऔषध तस्करी मौलाइरहेको छ । यस्तो तस्करीले यहाँ अनगिन्ती हिरो र भिलेनको उदय भइसकेको छ । यस्तोमा सोम्ब्रा नामको एक कुकुरको लागुऔषध तस्करीमा
मृत्युपश्चात पनि बढ्छ नङ् र कपाल
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १३, २०७५१३:०१0
एजेन्सी,१३ साउन । मरेपछि मानिसको शरीर के हुन्छ ? धड्कन रोकिन्छ, रगत चिसो हुन्छ र अरु अंगहरु कक्रक्क पर्न थाल्दछ तर नङ्ग र कपाल भने बढिरहन्छ हामी यी र यस्तै कुराले भ्रममा परिरहेका हुन्छौ । एरिक
पूरै विमानका एक्ला यात्री पाइलटले ककपिटमा राखेर खिचे सेल्फी, उपहारसमेत दिइयो
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १३, २०७५१२:४५0
एजेन्सी,१३ साउन । विमान भित्र एक्लो यात्री हुनु एक व्यक्तिको लागि मज्जाको अनुभव साबित भयो । साथीको विवाहमा समावेश हुन गएका साद जिलानी ग्रिसको कोर्फूबाट इंगल्याण्डको बर्मिंघर फर्कने तयारीमा थिए । उनले ४० युरो ५ हजार
खुसी र सफल दाम्पत्य जीवन बिताउन अपनाउनुस् यी कुरा
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १३, २०७५११:२७0
एजेन्सी,१३ साउन । दाम्पत्य जीवन सफल भयो भने मात्र घरमा सुख र शान्ति प्राप्त हुने गर्छ । बाचुन्जेल सँगै जिवन बिताउने कसम खाएर गरेको विवाह साना साना कुराको कारण पनि टुट्न सक्छ । त्यसकारण विवाह
युट्युब हेरेर बच्चा जन्माउने प्रयासमा महिलाको मृत्यु
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ११, २०७५१७:४०0
एजेन्सी,११ साउन । डाक्टरको विश्वास नलागेर युट्युबमा भएको भिडियोमा देखाइएको बच्चा जन्माउने तरिका अपनाउँदा एक महिलाको ज्यान गएको छ । आफैले जोखिमयुक्त काम गरेपछि ती युवतीको मृतयु भएको हो । धेरै रगत बगेपछि उनको ज्यान